Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-UK Breaking » INdlovukazi u-Elizabeth II yenqaba umklomelo we-Oldie of the Year
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Amasiko • Ezokuzijabulisa • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ze-UK Breaking
INdlovukazi u-Elizabeth II yenqaba umklomelo we-Oldie of the Year.
U-Queen Elizabeth II ugcizelele ukuthi "akahlangabezani nenqubo efanele" yomklomelo, ngoba "umdala njengoba uzizwa."
Iphephabhuku i-'Oldie 'likhethe iNdlovukazi u-Elizabeth II ngomklomelo kamagazini u-2021 Oldie of the Year.
Inkosi yaseNgilandi ebuse isikhathi eside yaphakamisa ukuthi iphephabhuku i-'The Oldie 'kufanele libheke kwenye indawo.
Umagazini wokuqala wakhishwa emuva ngonyaka we-1992, futhi ukushicilelwa kusukela lapho kwagcina isitayela sawo sobuciko, kugujwa ukuguga ngokwesiko eligxile kakhulu ebusheni.
I-Oldie, umagazini waseBrithani ophuma nyangazonke obhalelwe abantu asebekhulile “njengenye indlela elula enenhliziyo elula kunomshicileli ozifela ngentsha nosaziwayo”, ubuhlakani beNdlovukazi u-Elizabeth II ngemuva kokumazisa ukuthi ukhethelwe umklomelo kamagazini ka-2021 we-Oldie of the Year .
Ubukhosi Bakhe Indlovukazi Elizabeth II wenqabe isihloko esanikezwa abantu asebekhulile ngokufeza kwabo, egcizelela ukuthi “akahlangabezani nenqubo efanele” ngoba “umdala njengoba uzizwa.”
Lo magazini ushicilele impendulo yesilo kuhlelo lwayo lwangoNovemba, yize umyalezo ngokwawo ungowe-Agasti 21.
Encwadini emfushane enemigqa emithathu, inkosi yaseNgilandi eyabusa isikhathi eside kunazo zonke yaphakamisa ukuthi lo magazini kufanele ubheke kwenye indawo ukuthola “umamukeli ofaneleka ngokwengeziwe.”
Usihlalo wemiklomelo ka-Oldie, umbhali nomsakazi uGyles Brandreth, uchaze incwadi yeNdlovukazi njenge “thandekayo,” kodwa wengeza ngokuthi, “mhlawumbe ngokuzayo sizophinda sizwe uHlanga Lwakhe.”
Umagazini wokuqala U-Oldie washicilelwa emuva ngonyaka we-1992, futhi le ncwadi isisekele isitayela sayo se-idiosyncratic, igubha ukuguga ngokwesiko eligxile kakhulu ebusheni. Eminyakeni edlule, inikeze umklomelo we-Oldie of the Year kubantu abavela kuzo zonke izizinda zempilo abaye baba negalelo elikhethekile empilweni yomphakathi - kusukela kwabaphumelele kuma-Oscar kuya kwabathola iNobel, kusukela kubahlengikazi abanakekela umphakathi kuya kubagijimi asebemnkantshubomvu.
Umcimbi womklomelo walo nyaka - owokuqala owabanjelwa ngaphakathi kusukela ngo-2019 ngenxa yalolu bhubhane - wenzeka ngo-Okthoba 19 eSavoy Hotel, nomalokazana wenkosi uDuchess of Cornwall ethula le miklomelo. Phakathi kwalabo abaklonyeliswe ngendondo ka-2021 Oldie of the Year kukhona uDelia Smith, uBob Harris, uBarry Humphries, uMargaret Seaman, uRoger McGough, uDkt Saroj Datta, uDkt Mridul Kumar Datta noSir Geoff Hurst.
Indlovukazi Elizabeth IIUmyeni wakhe ongasekho, uPrince Philip, waqokwa njengo-Oldie of the Year ngo-2011. Encwadini yakhe yokubonga, wenza ihlaya: “Ayikho into efana naleyo yokuthi kukhunjulwe isimilo sokuthi iminyaka iyahamba - ngokushesha okukhulu - nokuthi seziqala ukwehla ngohlaka lwasendulo. ”
Indlovukazi ebusayo, ezohlala esihlalweni sobukhosi saseBrithani iminyaka engamashumi ayisikhombisa ngonyaka ka-2022, isenesikhathi esimatasa. NgoLwesibili, ubambe izethameli ezimbili ngesixhumanisi sevidiyo, ebingelela amanxusa aseJapan nawase-EU, ngaphambi kokuthi abambe umcimbi weGlobal Investment Summit eWindsor Castle.
Okthoba 20, 2021 ku-13: 45